Archive du 20200506
Antsirabe Ahiana efa tafiditry ny Coronavirus
Olona 7 mianaka no indray nalaina tamin’ny fiara mpitondra marary na« ambulance » ary nahiboka ao amin’ny Hopitaly Atsimo-Antsirabe omaly 5 mey
Gaëlle Borgia Mpanao gazety malagasy nahazo ny Pulitzer 2020
Ny mpanao gazety malagasy, Gaëlle Borgia, no nahazo ny loka Pulitzer 2020, ho an’ny sokajy International Reporting.
Maitre Olala “Tsy manaraka ny fenitry ny lalàna ny fanafahana an'i Arphine”
Tsy anjaran’ny filoham-pirenena fa an’ny fitsarana no tokony hamoaka ny mpanao gazety, Arphine Helisoa, hoy ny mpisolovava, Willy Razafinjatovo na Maitre Olala.
Gadra 2 maty tao Fenerive-Est Noheverina ho voan'ny aretina maivana
Nitondra fanazavana mahakasika ny nafahaty ireo gadra roa tao amin’ny fonjan’I Fenoarivo Antsinana ny Talem-paritry ny fonja.
Manenjana ny mpitatitra Malemy tsisy atoraka ny fanjakana
Nanamarika ny andro omaly ny adihevitra momba ny fitaterana teto Antananarivo sy ny manodidina.
Sehatry ny fizahantany Mpiasa miisa 44 000 no tandindonin-doza
Nihaino tsara ny kabaran’ny filoham-pirenena farany teo izahay, hoy ry zareo eo anivon’ny fivondronamben’ireo mpisehatra eo anivon’ny fizahantany eto Madagasikara.
Fiatrehana krizy Nahemotra ny fe-potoana fandoavan-ketra
Manoloana ny toe-draharaha ara-pahasalamana eto amin’izao tontolo izao sy ny firenena dia nanapa-kevitra ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bolam-panjakana,
Rivo Rakotovao Miantso fifanakalozan-kevitra amin’ny mpandraharaha
Nisokatra omaly 05 mey 2020 tolakandro ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohan’ny Antenimiera roa tonta.
Foara FIM andiany faha-15 Ahemotra amin'ny fotoana manaraka
Nanambara ny “Agence Première Ligne” mpikarakara ny hetsika foara iraisam-pirenena FIM fa noho ny fanitaran’ny fitondram-panjakana ho 15 andro indray ny hamehana ara-pahasalamana eo amintsika dia voatery hahemotra amin’ny daty
Fikarakarana lanonana Mahatratra 70% ny fatiantoka
Ny sehatry ny fikararana lanonana no voakasika voalohany amin`ny fametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana izay naharitra 45 andro.
Mpiasa 364 398 tsy ho voaloa karama Manaitra ny fanjakana ireo mpandraharaha
Tokony hisy fepetra haingana sy matotra ho fiarovana ny asa sy ny karaman’ny mpiasa amin’ireo Orinasa hoy ny Fivondronan’ny Orinasa eto Madagasikara
Faktioranan'ny Jirama Azo aloa tsikelikely ny volana Martsa sy Aprily
An-dalam-panomanana ny fivoahany amin’ny krizy ny orinasa JIRAMA amin’izao fotoana izao.
Fitsinjarana fanampiana Misy hatrany ireo manararaotra
Herisetra mianjady amin’ireo olona marefo 58 antso no voarain’ny polisy tao anatin'ny iray volana
Mirongatra ny herisetra ao anatin’izao fihibohana izao, indrindra fa amin’ireo voasokajy ho marefo.
Fizarana fanampiana ‘’Mizaka ny tsy eran’ny ainy ireo sefo fokontany”
Na fahazoam-baovao na fampitam-baovao avy amin’ny foibe dia hita ho miteraka savorovoro daholo ankehitriny, raha ny fahitan’ireo mpitantana fokontany azy, indrindra, mahakasika ireo fanampiana.
FI ASTRAMA sy ny HAFARI Hitsabo ny Malagasy amin’ny alalan’ny zavamaniry
Malaza ary tena mahazo vahana eto amintsika mihitsy amin’izao fotoana ny fitsaboana amin’ny alalan’ny zava-maniry taorian’ny nipoiran’ny tambavy CVO.
Sekolin-dry Masera eny Ilanivato Nanampy ireo mpianany
Tsy niandry ny fanjakana fa avy hatrany dia nandray andraikiny ny masera Ilanivato ka nanome fanampiana ho an'ireo mpianatra hanala fanadinana T5